mps-youtube: Tamba YouTube zvemukati kubva kune terminal | Linux Vakapindwa muropa
YouTube rave rimwe remasevhisi makuru iyo yatinogona kutendeukira ku pKutsvaga mavhidhiyo eanenge chero mhando uye ndeyekuti izvi zvinoonekwa senge network yemagariro. Iko kushandiswa kwatinowanzo kupa sevhisi iri kutsvaga kweanodzidzisa, nhau, mukutsvaga ruzivo pakati pevamwe.
MuGnu / Linux isu tine akasiyana maturusi iyo yatinogona kunakidzwa neiyi social network, kubva pakushandisa webhu bhurawuza, multimedia player kana zvakare kubva kune inouraya.
1 Nezve mps-youtube
1.1 Zvimiro zve mps-youtube
2 Maitiro ekuisa mps-youtube pane Linux?
3 Mashandisiro ekushandisa mps-youtube?
Ndokusaka ino nguva ini ndichatora iwo mukana wekutaura nezve mps-youtube, yatinogona kuridza nayo mimhanzi kubva kuYouTube zvachose mune inouraya, kunyange ichikwanisawo kutamba mavhidhiyo uchishandisa mplayer kana mpv.
Mps-youtube yakavhurika sosi muchinjiko-chikuva application yakanyorwa muPython chirongwa chemutauro uye icho yakavakirwa mpv chinova chikumbiro chinotibvumidza kushandisa chinongedzo kutsvaga, kutamba uye kurodha mumhanzi.
Zvimiro zve mps-youtube
El chinangwa chikuru chekushandisa kushandira seYouTube mimhanzi mutambi, iyo inopa sarudzo dze:
Tsvaga uye utambe odhiyo
Gadzira uye chengetedza zvinyorwa zvemuno
Tsvaga uye upinze YouTube playlists
Gadza yakasarudzika odhiyo fomati
Nedzimwe sarudzo senge:
Kutamba mavhidhiyo ekunze uchishandisa mpv, mplayer kana vlc
Wona vhidhiyo kutaura
Zvingasarudzika zviziviso nezve rwiyo shanduko
MPRIS v2 kutsigira
Yekupedzisira.fm kutsigira rutsigiro
Zvakare, sechimwe chinhu chinowedzera pamusoro pekutamba odhiyo ndizvozvo iko kunyorera kunotipa mukana wekushandura odhiyo kuti ive mp3, aac, wma, pakati pevamwe, chete izvo zvinoda ffmpeg uye avconv yacho.
Maitiro ekuisa mps-youtube pane Linux?
Kana iwe uchida kuyedza kana kutanga kushandisa iyi hombe application Isu tinofanirwa kutanga tave nekumwe kutsamira kwekuitwa chaiko kweimps-youtube mune yedu system.
Sezvataurwa mps-youtube yakanyorwa mu Pyhton, saka isu tinofanirwa kunge takaiseta pane yedu system, kana zvisiri, ingo tsvaga iyo package mune zvinyorwa zveyako system sezvo ichiwanika munzvimbo zhinji dzekuparadzira.
Kana isu tichida kuziva kana isu tine Python yakaiswa pakombuta yedu isu tinofanirwa kuvhura terminal uye kuitisa:
Iko kwavanofanirwa kugamuchira meseji neiyo yakaiswa vhezheni kana zvikasadaro ivo vanowana iyo "isina kuwanikwa" uye ivo vanofanirwa kuiisa:
Para Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa zvatinoisa ne:
Para nyaya yaFedora, yakavhurikaSUSE, CentOS uye zvigadzirwa:
Para Arch Linux, Manjaro uye zvigadzirwa:
Waita izvi izvozvi isu tinofanirwa kuwedzera nzira kufaira redu vashandi vane:
Iye zvino tinogona kuenderera mberi nekuisa iko kunyorera ne:
Como nhanho yekusarudza inogona kuisa dbus-python uye pygobject yemushandisi wako kana vachida mps-youtube kutsigira MPRIS v2, zvinoreva kuti vanozowana iyo media player inodzora muSound Menyu:
Sezvambotaurwa, kana iwe uchida kusanganisa kutamba kwevhidhiyo, unogona kuzviita nevlc, inova yako yakazara sarudzo yekuisa.
Mashandisiro ekushandisa mps-youtube?
Chete isu tinofanirwa kuvhura terminal uye titevere inotevera rairo kutanga iyo application:
Iye zvino tinogona kushandisa injini yekutsvaga yemukati Kuti uwane rwiyo rwekuteerera kana vhidhiyo, ingo shandisa unotevera kuraira:
Mps-youtube yakanyatsogadziriswa zvakare. Semuenzaniso, iyo yekutsvaga mitsva yekutsvaga inogona kugadzirirwa kuratidza mimwe minda. Kuti uone zvese zviripo zviripo, nyora "rubatsiro marongero" mu mps-youtube.
Kugonesa kutamba kwevhidhiyo mukushandisa isu tinofanirwa kuita uyu murairo:
Waita izvi Isu tinofanirwa kumisikidza mutambi unozove iye anozoitiswa kuitira kuburitsa vhidhiyo.
Kupi kugadzirisa iyo mpv player ingotsiva mplayer kana kumisikidza vlc shandisa "cvlc".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » mps-youtube: Tamba YouTube zvemukati kubva kune iyo terminal
Carlos Santiago akadaro
Yakanaka chinyorwa, chakandibatsira kuziva kutamba vhidhiyo. Kwaziso
Pindura Carlos Santiago